Badbaado Qaran oo ku qulquleysa Baarlamaanka | KEYDMEDIA ENGLISH
Badbaado Qaran oo ku qulquleysa Baarlamaanka
Colonel Xaadoole, oo xilligaas Muqdisho, kula hadlay Waqooyiga Muqdisho, wuxuu sheegay in Farmaajo so jeed ku riyaaday, isla-markaana aysan macquul ahayn in dalka laga leexiyo jidka Dimuqraadiyadda iyo qori isku dhiibka soo socday tan iyo billawgii qarnigaan.
JOWHAR, Soomaalia – Inta badan shaqsiyaadkii hoggaaminayay Ciidankii Badbaado Qaran ee Farmaajo ka diiday muddo kordhintii sharci darrada ahayd ee uu sameystay bishaan oo kale hal sano ka hor, ayaa ka mid noqday xubnaha Baarlamaanka 11-aad ee JFS.
Doorashada kursiga HOP106, oo xalay ka dhacday magaalada Jowhar, ayuu ku soo baxay Colonel Cusmaan Maxamed Maxamuud (Xaadoole), kaasoo ka mid ahaa hoggaankii ugu sarreeyay ee ciidankii ka yimid Shabeellaha dhexe, si ay u hor istaagaan muddo kordhintii.
Cusmaan Xaadoole, oo ka tirsan ciidanka Xoogga Dalka, gaar ahaam qaybta 27-aad, ayaa wareegga koowaad ee doorashada helay 56 cod, isaga oo ka adkaaday musharaxiinta kala ah; Bashiir Maxamed Yuusuf, Fowziya Sheekh Cali Maxamuud iyo Yaxye Abuukar Aadan.
Colonel Xaadoole, wuxuu bartamihii bishii April 2021, maalmo kadib muddo kordhinti Farmaajo, dhanka Waqooyi ka soo galay Muqdisho, wuxuuna ka dagaal galay xaafadda Mirinaayo, oo ay deganaayeen Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Xaaji Muuse Suudi.
Sarkaalkan iyo ciidankii uu hoggaaminayay ayaa dagaalladaas kaga adkaaday ciidamdii ka amar qaadanayay Madaxweynihii hore Farmaajo, kuwaas oo doonayay in ay xoog ugu sii hayaan kursiga, ka hor inta aysan ugu danbeyn danta iyo tamrtoodu u run sheegin.
Colonel Xaadoole, oo xilligaas saxaafadda kula hadlay Waqooyiga Muqdisho, wuxuu sheegay in Farmaajo so jeed ku riyaaday, isla-markaana aysan macquul ahayn in dalka laga leexiyo jidka Dimuqraadiyadda iyo qori isku dhiibka soo socday tan iyo billawgii qarnigaan.
Baarlamaanka 11-aad, waxaa hore ugu biiray, Saadaq Cumar Xasan [Joon], oo ahaa sarkaalkii ugu horreeyay ee diiday muddo kordhinta, Guddoomiyaha degmada Deyniille, Maxamed Abuukar Cali (Jacfar) iyo Xaaji Muuse Suudi oo kaalin weyn ku lahaa BBQ.
Sidoo kale, waxaa intooda badan dib u soo laabtay, Xildhibaannadii ka hor yimid muddo kordhintaas, isla-markaana waxaa daaqadda ka baxay inta badan Xildhibaannadii difaacayay Farmaajo ee ansixiyay in waqti kororsiga baal-marsanaa shuruucda dalka.
Colonel Cusmaan Maxamed Maxamuud (Xaadoole), wuxuu aad ugu dhow yahay Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, sidoo kale wuxuu calaaqaad fiican la leeyahay Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed iyo Musharrax Cabdulqaadir Cosoble.